काठमाडौँ, १४ कात्तिक । यसपटकको तिहारमा विद्युत उपभोग भरपूर गर्न पाइने छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पर्याप्त विद्युत रहेकाले उपयोग बढाउन आग्रह गरेको हो । तीन बर्ष अघिसम्म १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार ...
पोखरा, १४ कात्तिक । गण्डकीसहितका तीन प्रदेशमा ३२ अर्बको लगानीमा मोडेल गाई फार्म स्थापनाको तयारी भएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा गण्डकीका साथै प्रदेश २ र प्रदेश ३ मा फार्म खोल्न लागिएको ...
मुस्ताङ, १४ कात्तिक । मुस्ताङको प्रसिद्ध तीर्थस्थल मुक्तिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न जाने नेपालीले पनि अब शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गर्न शुल्क अनिवार्य गरेपछि हिन्दु र बुद्ध ...
नेपाल–कतारबीच विविध विषयमा सहमति
काठमाडौँ, १४ कात्तिक । नेपाल र कतारबीच कूटनीतिक, सरकारी र विशेष राहादानीवाहकलाई प्रवेशज्ञाबिना आवतजावतको सहजीकरण गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र कतारका उपप्रधान ...
अस्पतालबाट प्रधानमन्त्री ओलीको भावुक सन्देश
काठमाडौँ, १४ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू अस्पतालबाटै चाडै फर्कने बताउनुभएको छ । उहाँले अस्पतालबाट चाडै फर्कने र समृद्ध नेपालको सपना सकार पार्न सक्रिय रहने बताउनुभएको हो । त्रिवि शिक्षण अस्पताल ...
अब ५८ सयमै मलेसिया
काठमाडौँ, १३ कात्तिक । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपालीले अब ५८ सय रुपैयाँ मात्र खर्चिए पुग्ने भएको छ । नेपाल र मलेसिया सरकारबीच सोमबार काठमाडौंमा भएको दुईपक्षीय श्रम समझदारीले डेढ ...
काठमाडौँ, १२ कार्तिक । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर चिसो बढेको छ । दसैंअघिसम्म अधिकांश भागमा गर्मी महसुस भए पनि दसैंलगत्तै तापक्रम घटेको छ । उपत्यकासहित देशभर नै चिसोको प्रभाव विस्तार हुँदै गएको जल ...
काठमाडौँ, १२ कार्तिक । तपाईको मोबाइलमा नचिनेको विदेशी नम्बरबाट ‘मिस्ट कल’ आइरहेको छ ? छ भने महत्वपूर्ण कल होला भनेर ती नम्बरमा कल फिर्ता नगर्नूस्, तपाईको ब्यालेन्स गुम्न सक्छ । विदेशी ...
भद्रगोल बन्यो निजामती
काठमाडौँ, ११ कार्तिक । सरकारको ढिलासुस्तीले निजामती कर्मचारीमा भद्रगोलको स्थिति सिर्जना भएको छ । कर्मचारी समायोजनका लागि कानुन निर्माण गरेर धमाधम समायोजन हुनुपर्ने अवस्थामा अहिलेसम्म संघ, प्रदेश, तथा स्थानीय तह निजामती सेवा ...
सबैका आँखा वनमै, सरकारबाटै असुरक्षित
कैलाली, १० कात्तिक । सरकारले कैलालीको अत्तरियास्थित मेचीमहाकाली जडीबुटी उद्योग प्रालिका लागि भन्दै २०५९ साउन ७ गते जंगल क्षेत्र रहेको ८७ बिघा जमिन (५८ हेक्टर) उपलब्ध गरायो। यस्तै २०५१ माघ १० ...
छिमेकी भारत, जसले गफ दिन्छ, अनुदान रकम दिँदैन
काठमाडौं, १० कात्तिक । भूकम्पले भत्किएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि भारतले दिने भनेको ७५ अर्ब रुपैयाँ नआउने भएको छ । भारतले पुनर्निर्माणका लागि २५ अर्ब अनुदान र एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋणमा ७५ ...
अब लाइसेन्स लिन ८ कक्षा पास
हेटौँडा, १० कात्तिक । प्रदेश ३ सरकारले चालक अनुमति प्राप्त गर्न कक्षा ८ उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा चालक अनुमति ...
मेजरसहित १८० सैनिकमाथि ‘कोर्ट मार्सल’
काठमाडौँ, ९ कार्तिक । सिपाही भर्नामा सर्वसाधारणबाट मोटो रकम असुल्ने अधिकृतसहित करिब २ सय सैनिक कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् । सेनामा जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर मोटो रकम असुलेको अभियोगमा मध्यपृतना मुख्यालय ...
काठमाडौंमा बढ्यो डेंगु संक्रमण
काठमाडौँ, ९ कार्तिक । राजधानीमा लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेंगुका बिरामीको संख्या बढेको छ । पछिल्ला दिन बालाजु, ढुंगेधारा क्षेत्रमा यसको संक्रमण देखिएको छ । ‘ढुंगेधारास्थित निजी क्लिनिकका चिकित्सकले दसैंअगावै त्यहाँ ७ ...
तीन महिनामा उपलब्धि शून्य, यसरी हुँदैछ अनुसन्धान
काठमाडौँ, ९ कार्तिक । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको तीन महिना पुग्दा पनि दोषी पत्ता लगाउन गरिएका अनुसन्धानको उपलब्धि शून्य रहेको छ । प्रहरीले आफ्नै तरिकाले गरेका अनुसन्धान र सरकारबाट गठित उच्चस्तरीय ...
४ मंसिर, काठमाडौं । लामो समयसम्म पिसाब च्याप्दा यसले संक्रमण हुने सम्भावना बढाउँछ। जति पिसाब रोक्यो, उति पिसाब थैलीमा संक्रमण हुन्छ। त्रिवि शिक्षण अस्पताल (महाराजगन्ज) का युरोलोजिस्ट डा. पवन चालिसे भन्छन् : थैलीमा ...